GPS020W - OMG Watch GPS Tracker tsara indrindra ho an'ny ankizy autisme / autistic / zaza ilaina manokana | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autisme / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Tag: zaza manana autism, zaza ilaina manokana, gps tracker ho an'ny ankizy, fitaovana GPS manenjika, track track ho an'ny ankizy, tracker ho an'ny ankizy, tracker ankizy
GPS020W - GPS Tracker Watch ho an'ny autisme / Ankizy autiste / zaza manana filàna manokana dia natao hanomezana fiadanam-po ny ray aman-dreny na ny fikarakarana ny momba ny zaza iray. Tsy mora foana ny mitazona maso roa amin'ireo tanora mavitrika, ary ny fanenjehana GPS no fomba tsara indrindra arahin'izy ireo sy hiantohana ny fiarovana azy.
* S $ 198 (Mandritra ny volana 6) - usu $ 248
Stylish GPS Watch dia taranaka vaovao an-tariby GPS tracker izay manana fomba fiasa maro GPS + WIFI + LBS, izay azo ampiasaina ho an'ny ankizy, ny lehibe, ny anti-panahy, ny kilemaina ary ny sisa. Io gadget kely io dia tsy famantaranandro fotsiny, GPS tracker, afaka miasa ho toy ny finday ihany koa izay afaka miantso an-telefaona! Vita amin'ny asa ihany koa izy io, toy ny fakan-tsary, step counter, tatitra momba ny toetr'andro, antso an-telefaona, fanaraha-maso lavitra ny feo, lalana ara-tantara, zoro-fefy, resaka feo ary ny maro hafa!
GPS + WIFI + LBS Maody maody hametrahana toerana maromaro: Ny fitaovana dia afaka mamantatra ny tambajotram-pizaràna ho azy mivantana ary manidy ny fomba fiasa mihetsika automatique koa, ao an-trano amin'ny fampiasana fomba fiasa WIFI / LBS raha mivoaka ivelan'ny GPS fametrahana mode. (Sarintany Google Map)
Antso: Ankoatry ny maha GPS Tracker azy dia afaka miasa toy ny finday hiantsoana finday ihany koa ilay fitaovana!
Historical Route Track (Records Footprint): Ny làlan'ny fivezivezena an'ny mpihazona GPS ao anatin'ny 3 volana farany dia ho voarakitra hojerena amin'ny ho avy, mba hahafahanao manara-maso ireo toerana rehetra nalehan'ny tompona GPS, mora kokoa ny mahita ny very, toy ny zanakao, ny be antitra, ireo malala ao amin'ny fianakavianao na valizy, entana sarobidy, biby fiompy, fiara, moto sns.
Fanairana elektrônika (Geo-fence): Azonao atao ny mametraka faritra azo antoka (ny mpitafy GPS ho ivon-toerana) hitazonana ny mpitazona famantaranandro ao anaty faritra, rehefa mivoaka ny faritra azo antoka ny mpihazona GPS, dia hampiakatra fanairana ho azy eo amin'ny mailaka findainao ilay fitaovana.
Fanaraha-maso ny feo lavitra (Mihainoa): Ao amin'ny fampiharana — fananganana, azonao atao ny mametraka laharana fanaraha-maso, rehefa misafidy ny fiasa "Remote Voice Monitoring" ianao, dia halefa ny kaomandy amin'ny fitaovana GPS aorian'izay dia hiantso ny nomeraon-maso ho azy ny fitaovana, (raha ianao no tompony ny isa fanaraha-maso) dia tsindrio raha hamaly ny antso ianao, ary afaka maheno ny feo manodidina ny fitaovana GPS ianao raha tsy maheno anao mihitsy ny lafiny fitaovana! Amin'ity fiasa ity, raha sendra todika mampidi-doza ny zanakao na lavitra anao ny biby fiompinao, dia azonao atao ny mandre ny zava-mitranga manodidina azy!
Camera: Tohano ny sary mandray, mahafinaritra ary ny lamaody.
Dinika orinasa tsara ho an'ny fanatanjahan-tena sy fahasalamana.
Weather: Tapety iray fotsiny mba hahafantarana ny toe-pahasalamanao eo an-toerana.
Voice Chat: Afaka mifampiresaka amin'ny olon-tianao ianao amin'ny alalan'ny famantaranandro.
Tsy misy vola aloa isam-bolana (tohano ny karama sy ny karama aorian'izay).
Ny fanaraha-maso marina
3 karazana maody miasa. Ny mpampiasa dia afaka misafidy ny fametrahana amin'ny lozisialy rindrambaiko APP hisafidy ny maody miasa.
1. Fametrahana haingana (minitra 1): Ny elanelam-potoana 1 minitra dia manavao ny mombamomba ny toerana.
2. Standard positioning (minitra 10): Ny elanelam-potoana 10 minitra dia manavao ny mombamomba ny toerana.
3. Mamonjy ny fametrahana herinaratra herinaratra (ora iray): Ny elanelam-potoana 1 ora dia manavao ny mombamomba ny toerana.
Bika Aman 'endrika: Ny tarika famantaranandro miambina tontolo iainana manify sy ny takelaka famantaranandro vita amin'ny alimo dia mahatonga azy ho maivana sy kanto ary avo lenta; ny asa-tanana fanodinana fitaovana manokana dia mahatonga azy ho tsara mahatsapa sy mahafinaritra amin'ny maso.
Fampiasa maro: Ho an'ny ankizy, ny olon-dehibe, ny loholona, ​​ary ny sisa.
Free Mobile ampiasaina: Android sy IOS rafitra, (fampiharana mivantana sy tolotra maimaim-poana amin'ny fiainana!)
Fotoana efa antonony: Misy ny fotoana fiasan'ny 3 fotoana tsy voafetra raha ilaina ny famoahana angona angon-drakitra: 1 min, 10 min, ora 1. Fohy lavitra kokoa, ny fiainana an-taonan'ny batterie. Tadio 1 min, batterie maharitra amin'ny andro 1; 10 min, batterie maharitra hatramin'ny andro 2-4; 1 ora, batterio maharitra mandritry ny andro 5-7.
loko: Pink, Black, Brown, Blue
Style: Stylish Watch Design
Frequency: GSM: 900 / 1900MHz WCDMA: 900 / 2100MHz
GSM: 850 / 1900MHz: WCDMA: 850 / 1900MHz (safidy)
loko: Black, Brown
Antenaina GPS: Amboaram-peo antenne seriea avo lenta
Antenaina GSM: FPC
Slot karatra SIM: A slot
I / O port: USB seranan-tsambo
GPS misy: 20 channel
GPS chip mandray fahatsapana: Fitetezana fahamendrehana: -165dBm, fahatsapana fahamatorana: -148dBm
GPS ny fisoratana fisoratana: 5 ~ 15m
Toerana fitobiana marim-pototra: 100-1000M
Ny fijanonana farany ambany indrindra: <0.5 mA
Salan'isa mijanona eo: <2.5 mA
Salan'isa miasa ankehitriny: <55mA
Humidity: 5% hatramin'ny 95% tsy misy condensation
Certification: CE, ROHS, FCC ary sns.
Antenaina GPS: Amboaram-peo FPC anterina
Antenaina GSM: Fitaovam-pandaharana efatra matetika amin'ny PIFA
Fanohanana OS: Android 2.3 sy ambony, iOS 5.0 ary ambony
5899 Total Views 2 Views Today
GPS020W -OMG GPS Tracker Watch ho an'ny Alzheimer…